e-fiara Factory, mpamatsy - mpanamboatra e-fiara China
Môtô scooter citycoco scooter harley 60v 12ah 60v 20ah bateria lithium ion ho an'ny namboarina na nosoloina
Izahay dia mamatsy ny môtôsy citycoco namboarina Harley scooter 60v 12ah 60v 20ah lithium ion bateria ho an'ny namboarina na fanoloana.Misy efa-6 taona ity tranombarotra ity dia manana traikefa feno amin'ny famolavolana sy famokarana kitapom-batana lithium, E Bike Battery, fitahirizana ny masoandro bateria, bateria scooter sns.
Ao amin'ny orinasa misy anay dia manana fitaovana famokarana feno mendrika mihoatra ny $ 3000000 izay ao anatin'izany ny fitaovana fitsapana fiainana fiainana sela, fitaovana mandeha ho azy, fitaovana fitiliana hafanana ambony, fitaovana fitsapana hafanana ambany, fitaovana fitiliana fitsapana, fitaovana fitsapana hovitrovitra, kitapo bateria manontolo Fitaovana fitiliana aina, santionany sns .. Mpanjifa manarona ny ankamaroan'ny ao Eropa, Azia ary amerikana.Manantena izahay fa lasa mpiara-miasa maharitra aminao any Sina.
Factory vidin'ny ebike bateria 36v 4.4ah / 10ah / 20ah herinaratra bisikileta ho an'ny 1000w bisikileta skateboard hoverboard mandanjalanja fiara
Izahay dia mamatsy bateria ebike vidin'ny varotra 36v 4.4ah / 10ah / 20ah bateria bisikiletan'ny bisikileta ho an'ny 1000w bisikileta skateboard hoverboard mandanjalanja. Afaka manome vahaolana iray sy dingana rehetra avy amin'ny bateria mankany amin'ny singa amin'ny batterie ianao toy ny mpanjifan'ny mpanjifa.Fovering of Europe, Tsenan'i Azia sy Amerika. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina.
Lifepo4 24V 20AH Lithium ion bateria fonosana ho an'ny RV / Camper / seza misy kodiarana elektrika
Izahay dia mamatsy ny vidin'ny orinasa Lifepo4 24V 20AH Lithium ion Battery Pack for RV / Camper / Electric wheelchair.Namboatra tranokala fandraharahana efa ela niarahana amin'ny orinasam-pifandraisana IC sy finday fanta-daza, toa ny San-yo, Panasonic, Samsung. LG, Sony sns, ary ny ankamaroan'ny vokarintsika dia nahazo CE, RoHs, UN38.3, sertifitra MSDS.Customer izay mahasahana ny ankamaroan'ny Eropa, Azia ary amerikana.Ireo dia manantena ny ho lasa mpiara-miasa maharitra aminao any Chine.
wholesales lithium ion pack 60v 16S 48v 13s 36v 10s 15Ah / 20Ah / 30Ah ho an'ny E-sctooter
Izahay dia mamatsy ny vidin'ny orinasa mpamokatra bateria lithium ion 60v 16S 48v 13s 36v 10s 15Ah / 20Ah / 30Ah ho an'ny E-sctooter. Nanangana fifandraisana orinasa maharitra amin'ny orinasa IC sy sela misy bateria malaza izahay, toy ny San- Yo, Panasonic, Samsung, LG, Sony sns ary ny ankamaroan'ny vokatray dia nahazo mari-pankasitrahana CE, RoHs, UN38.3, MSDS. Ireo mpanjifa mandrakotra ny ankamaroan'ny Eropa, Asia ary Amerika. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina ianao .
Ny bateria lithium ion azon-kitapo 48V 20Ah ho an'ny Bike Electric / E-scooter / E-skateboard miaraka amin'ny vidin'ny orinasa
Izahay dia mamatsy fiantohana bateria lithium ion wRechargeable 48V 20Ah ho an'ny Electric Bike /E-scooter/E-skateboard.Nanao tranokala fandraharahana efa ela niarahana amin'ny orinasam-pifandraisana IC sy finday fanta-daza, toa an'i San-yo, Panasonic , Samsung, LG, Sony sns ... ary ny ankamaroan'ny vokarintsika dia nahazo CE, RoHs, UN38.3, sertifitra MSDS.Customer izay mahasahana ny ankamaroan'ny Eropa, Azia ary Amerika.Manantena izahay fa lasa mpiara-miasa maharitra aminao any Chine.